I-MCSE Certification - All You Need To Know - ITS Tech School
Iyiphi indlela ye-MCSE?
I-Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) yikhosi yesitifiketi eyenzelwe abaqeqeshi bekhompyutheni / iinjineli abafuna ukugqwesa kwimida ye-IT, izisombululo nezokhuseleko. Isatifikethi se-MCSE siphakamisa ukuqeshiswa kwabasebenzi be-IT ngokuzixhobisa ngokukwazi ukuyila iziseko kunye nokufakela, ukulungisa, ukulawula nokujongana neengxaki. Isatifikethi siphinde sikhombise ubuchule bezakhono zokufudula izisombululo kwakunye neenkqubo eziza kufuneke / iinkonzo zoshishino.
Ngubani obanika isitifiketi se-MCSE?
Yintoni i injongo ye MCSE?
Injongo ephambili ye-MCSE isatifikethi kukunika iziqinisekiso eziphezulu eziphezulu zokusebenza kunye nobuchule kubaviwa. Abaviwa bafunda izakhono ezifunekayo
Yakha izisombululo zefu ezintsha;
Qalisa isikhungo seenkcukacha esisebenzayo nesimanje;
Ukuyila, ukuphunyezwa kunye nokujongana neengxaki zokusebenza okanye izakhi zayo;
Ukulawula idatha, iinkqubo kunye nolwazi lwayo;
Imisebenzi enxulumene neNethiwekhi.
Yiyiphi imilinganiselo yokufaneleka yokubonakala isitifiketi se-MCSE?
Ukuvela kwi-MCSE yokuhlola, abaviwa kufuneka babe I-MCSA (isiqinisekiso seMicrosoft Certified Solutions Associate).
Ixesha elide kangakanani?
Ngokuxhomekeka kwiimodyuli ezikhethiweyo, ubude bekhosi buyahluka kwiinyanga ze-2 kwiinyanga ze-6.
Ukwakhiwa kwekhosi ye-MCSE isitifiketi:
Mobility – I-Microsoft Intune, I-Azure Active Directory, Ulawulo lwamalungelo ama-Azure, iMenenja yoCwangciso loLawulo lweNkqubo, iWindows System Centre
Cloud Platform and Infrastructure – I-Windows Server Virtualization kunye ne-Microsoft Azure
Productivity – I-Microsoft Office 365, i-Microsoft Office Exchange, i-Skype yeBusiness & SharePoint
Yintoni ekuqinisekiseni ii-MCSE- kutheni kuyadingeka?
Isatifikethi seMicrosoft sihlala sisisigxina kwaye sisisigxina njengoko nje iinkampani zisebenzisa ubugcisa obuhlanganiswe phantsi kwesiqinisekiso. Ngethuba lexesha, izatifikethi zishiya umhlala phantsi kwaye ziba lilifa. UMicrosoft uye wahlaziya umgaqo-nkqubo wokuvuselela ofuna bonke abaqeqeshi be-IT ukuba bavuselele iziqinisekiso zabo ze-MCSE ukuba bahlale behlala ngokukhawuleza njengoko ukubuyekezwa kwetheknoloji entsha kukhishwa ngezikhathi ezithile. Ngexesha, xa ubuchwepheshe obutsha kunye noviwo lwabo luqaliswa Microsoft, Iingcali ze-IT nazo zifuna ukuphucula izakhono zabo nolwazi ngokuthatha ezi ziviwo.
Kufuneka ufumane amanqaku amaninzi ukuze ususe uvavanyo?
Uvavanyo lwe-MCSE oluqinisekisiweyo luye lwacelwa ukuba lugwebe ubuchule bobabini kunye nezakhono zomviwa kwizobuchwepheshe. Kufuneka ufumane i-70% ukucima ukuhlolwa kweMicrosoft. Ukufumana ipesenti yebhalansi jikelele kubalulekile. Ukuba umntu ufumana ipesenteji ephezulu kwisethi esinye sekhono kunye nepesenti ezantsi kwelinye isakhono, usekhokelela kwi-FAIL. Ngoko, ukulungiselela jikelele kubalulekile. Kwakhona, ulwazi olusebenzayo endaweni yokufunda nje luya kufumana iziphumo ezifunwayo.
Ixabiso leliphi ikhosi?
Ukufumana isatifikethi se-MCSE, umntu kufuneka acacise iimviwo ezixhenxe. Ukubonakala kwimeko nganye yovavanyo ixabisa malunga ne-Rs. 8000. Iindleko ezongezelelweyo zibandakanya izinto zokufunda kunye nezikhokelo zokufunda ezifunekayo kubaviwa ukuba bahlawule.
Umviwa angazikhethela ukufundisisa ngokwabo kunye neZiko loQeqesho lweMicrosoft okanye angakwazi ukujoyina isiko esikhankanyiweyo kwaye ufumane uncedo ekulungiseleleni iimviwo ngendlela ehleliweyo.
Kuyafaneleka ukukhankanya, nangona kunjalo, ukuba inzuzo yexesha elide lokufumana esi siqinisekiso singaphezulu kweendleko ezenziweyo.
Ubude bexesha loviwo
Uvavanyo lwe-MCSE kufuneka lugqitywe kumzuzu we-150. Nangona kunjalo, kubaviwa abangabakho isiNgesi kodwa baye bakhetha ukuthatha uvavanyo lwesiNgesi, ixesha elide linokuthi linikezelwe.
Kwamazwe amaninzi, kukho amaziko e-Pearson VUE, apho abaviwa banokuthatha le mviwo. Ukuba abaviwa baye bathabatha isigqibo sokujoyina isikolo sokuqeqesha, siya kuba neziseko zalo kunye namaziko abo ukuze bancede abaviwa ukuba babhalise kwaye babonakale kwiimodyuli ezahlukeneyo zeziqinisekiso.
Isiqinisekiso se-MCSE singasetyenziswa njani?
Emva kokuzalisekisa imigaqo yokufaneleka, isatifikethi se-MCSE siphakamisa ukuqeshwa komviwa ngokuqinisekisa ubungcali babo bobugcisa nobugcisa. Bafanelekile kwimisebenzi njengengcali yenkxaso yekhompyutha kunye nohlalutyo lolwazi lokhuseleko. Isatifikethi sixhobisa ootitshala ngezakhono ezininzi ezinxulumene nokuyila, ukuphunyezwa nokuphathwa kweziseko zeteknoloji usebenzisa iiplatifti zee-Microsoft.
Uchwepheshe we-MCSE oqinisekisiweyo unokukhetha imisebenzi ephakathi kwimihlaba ekhankanywe apha ngentla:
Inethiwekhi / Injineli yeeNkqubo
LoLawulo lweeNkqubo zoLwazi
I-Analytical Operations Network
I-Analyst System, kunye
Ikamva labaviwa abavela kwiimviwo ze-MCSE